Miyuu Zinedine Zidane Doonayaa In Uu Shaxdan Kaga Adkaato Barcelona Si Uu Sumcadii Real Madrid U Soo Celyo? - Gool24.Net
Miyuu Zinedine Zidane Doonayaa In Uu Shaxdan Kaga Adkaato Barcelona Si Uu Sumcadii Real Madrid U Soo Celyo?
Zinedine Zidane ayaa ku jira hawlgal wayn oo uu ku doonayo sidii uu Real Madrid dib ugu soo celin lahaa halkii ay ku lahayd horyaalka La Liga iyo Champions League.
Kadib markii ay Real Madrid soo qaadatay xili ciyaareed musiibo ah oo ay koob la’aan iyo ceebo badani iskugu darsameeyeen ayaa Zidane dib loogu soo celiyay Santiago Bernabeu si uu kooxda u samata bixiyo.
Laakiin Zidane ayaa doonaya in isbadal wayn laga sameeyo kooxda si uu ula tartami karo kooxda Barcelona oo koobka horyaalka La Liga ku soo guulaystay labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Waxa kale oo uu Zidane doonayaa in uu soo celiyo mucjisadiisii tartanka Champions League inkasta oo uu marka hore u baahan yahay in uu soo dhiso koox uu koobka ugu tartami karo.
Haddaba shabakada Gool24 oo warkii hore idiinku soo gudbisay shaxda ay Barcelona u diyaarsanayso xili ciyaareedka soo socda ayaa markale halkan idiinku haysa shaxda macquulka ah ee uu Zidane doonayo in uu Barca kula tartamo.
Ugu horayn Zidane waxa uu xaqiijiyay in aanu dhamaan ciyaartoyda kooxdiisa uu hadda haysto aanu wada eryi doonin balse uu isla kooxdan ku dul dhisi doono ciyaartoyda uu u arko in ay xoojin u samayn doonaan.
Ugu horayn waxay Real Madrid go’aan ku gaadhay in Keylor Navas uu kooxda ka bixi karo iyaga oo goolhayaha owaad u doortay Courtois.
Waxa kale oo ay Madrid doonaysaa in xili horeba kooxdeeda uu soo gaadho difaaca dhexe ee Eder Militao kaas oo ay bishii January ka iibsatay kooxda FC Porto wuxuuna difaaca dhexe kala soo muuqan doonaa Sergio Ramos iyo haddii uu Varane kooxda sii joogo.
Zidane ayaa sii haysan doona Dani Carvajal iyo Odriozola oo difaaca midig uu ku tartansiin doono halka uu doonayo in uu soo celiyo saamayntii fiicnayd ee Marcelo uu kooxda ku lahaa.
Waxa kale oo wararka ugu waa wayn noqon doona sida uu Zidane ugu guulaysto saxiixyada Eden Hazard iyo Pual Pogba oo noqon doona labada xidig ee uu u diyaarsaday in ay kooxdiisa xoojin wayn u noqon doonaan.
Haddii ay Madrid ku guulaysato saxiixyada Eden Hazard iyo Pual Pogba waxay taasi Los Blancos siin doontaa dheeli tirnaan wayn oo kooxeed iyada oo Luka Modric iyo Casemiro ay ilaa hadda yihiin labada xidig ee khadka dhexe kula soo bixi kara Pogba.
Toni Kroos ayaa mustaqbalkiisa shaki la galinayaa balse haddii uu kooxda sii joogo waxa uu booska kula tartami karaa Modric, Casmiro iyo Pogba.
Dhinaca kale Zidane ayaa go’aan sahlan ku gaadhay in Karim Benzema uu kooxda sii joogo kadib xili ciyaareed cajiib ah oo uu soo qaatay wuxuuna doonayaa in uu weerarka kala ciyaarsiiyo gool dhaliyaha kooxda Eintracht Frankfurt ee Luka Jovic.
Luka Jovic oo xili ciyaareedkan wacdaro soo dhigay ayay Real Madrid ku doonaysaa 60 milyan inkasta oo ay jiraan kooxo kale oo kula tartamayaa balse Madrid ayaa la sheegay in ay tartankiisa hogaaminayso.
Shaxda Macquulka Ah Ee uu Zidane La Soo Shirtagi Karo Xili ciyaareedka Cusub.
Haddaba akhirste, haddii aad taageere Real Madrid ah tahay, miyay shaxdani tahay shaxdii uu Zidane ku awoodi lahaa in uu Barcelona kaga joojiyo horyaalka La Liga in ay markii saddexaad oo isku xigta ay ku guulaysato?
Ani ilama ahan waaYo waa inuu wada helaa hazard iYo NeYmar iYo mbape midkood weerarkana lagu sii ciYaaro karim bezema💪⚽️